MUQDISHO, Soomaaliya - Gollaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah go'aamiyey in Kal-fadhiga afaraad ee Gollaha uu furmo 10-ka bishaan October, 2018.
Senator Cabdi Kaafi Macalin Xasan, Habdhooraha Golaha Aqalka Sare oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa tibaaxay qodobkaan ku jira Ajandayaasha kulan ay maanta yeesheen Guddiga joogtada ah ee Gollaha.
Handhoraha ayaa cod dheer ku qeexay in kulankooda sidoo kale arrimaha ay isla soo qaadeen uu qayb ka ahaa ahayd sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee maamuladda dalka ka jira iyo dowladda dhexe.
Xasan ayaa hoosta ka xariiqay in guddoonka uu isla gorfeeyey sidoo kale warbixinadii ay soo gudbiyeen Guddiyadii dhowaan oo kala direy caasimada maamuladda, kuwaasi oo qoraalo kala duwan loosoo dhiibey.
Fadhiga afaraad ee Aqalka Sarre oo balanku ahaa inay isla furmaan midka Gollaha Shacabka ayaa dib udhac uu ku yimid xili sababta lagu sheegay amaanka xarunta iyo sababo kale oo farsamo.
Aqalka Sare oo ka kooban 54 mudane, ayaa ku matala dowladda dhexe maamuladda laga soo doortey, iyadoo mararka qaar dhex-dhexaadiya muran siyaasadeedyada soo kala dhex-gala labada dhinac, inkastoo aysan u awood badnayd sida Gollaha Shacabka.
Soomaliya 01.09.2018. 15:19
Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, ayaa lagu eedeeyay inuu dastuurka dalka u gacan-geliyay...
Soomaliya 01.11.2018. 11:49
Gollaha Shacabka oo cod u qadaya lacago mugdi ku jira oo Beyle horkeenay
Soomaliya 14.11.2018. 11:08
Farmaajo oo amar duldhigay Xukuumadda kadib markii uu Garowe kasoo laabtay
War Saxaafaded 30.01.2019. 00:27
Xildhibaan ka hadlay sababta Farmaajo aanu u saxiixi karin Xukunnada Dilka ah
Soomaliya 19.09.2018. 10:22